Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. कम्युनिस्टहरु किन जातीय मुद्दा उठाउँन चाहँदैनन् ? :: Lumbinitimes
आइतबार, कात्तिक २१, २०७८ कोबाड गांधी
यदि व्यवहारिक स्तरमा हेर्नेहो भने मैले यी तर्कहरु पनि सुनेको छु, यीमध्ये केही प्रतिभाशाली व्यक्तिहरु धेरै गरिब थिए। भयानक परिस्थितीमा बाँचिरहेका थिए। त्यसैले स्वभाविक रुपमा मलाई लाग्छ उनीहरु आफ्नो स्थितीमा बदलाव देख्न चाहन्थे। र, त्यो बदलाव उनीहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देख्न सकेका थिएनन्। त्यसैले उनीले कम्युनिस्ट आन्दोलन छाडे। यस्तो पनि भएको छ, मैले देखेको छु।
-कोबाड गांधी एक कम्युनिष्ट र जाति-विरोधी कार्यकर्ता हुन्। उनले दिल्ली, आंध्र प्रदेशसहित भारतका धेरै जेलमा ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिक कैदिको रुपमा एक दशक विताएका छन्। जब उनलाई २००९ मा पहिलोपटक गिरफ्तार गरिएको थियो त्यतिबेला उनलाई ‘बरिष्ठ माओवादी नेता’ भएको आरोप लगाइएको थियो। अहिले अदालतले उनलाई त्यस्ता आरोपबाट सफाई दिइसकेको छ। २०१९ को बर्षान्तमा जेलबाट बाहिर आएर उनले आफ्नो जीवनको अनुभवहरुलाई सिलसिलेवार लेख्न शुरु गरे। साम्यवादतर्फको उनको झुकाव, महाराष्ट्रमा दलित प्यान्थर्सको स्थापना, आफ्नी दिवंगत जीवनसाथी अनुराधा र देशमा रहेका जेलको भौतिक स्थितीका बारेमा उनले किताब लेखेका छन्। गत मार्चमा उनको फ्र्याक्चर्ड फ्रिडम: ए प्रिजन मेमोअर नामको किताब प्रकाशित भएको छ। भारतका स्वतन्त्र पत्रकार तथा कानूनका विद्यार्थी सबा गुरमतले कोबाडसँग गरेको कुराकानीको अनुवादित र संपादित अंश यहाँ विमर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २१, २०७८, १०:४०:००
आइतबार, असार १९, २०७९ कोबाड गांधी
शनिबार, असार १८, २०७९ कोबाड गांधी